Azịza ngwa ngwa: Otu esi akwụsị mmiri na-ekupụ site na tankị azụ - BikeHike
Mbido » iche » Azịza ngwa ngwa: Otu esi akwụsị mmiri na-ekupụ site na tankị azụ
Kedu ka m ga-esi kwụsị mmiri aquarium m ka ọ ghara ikpofu?
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe tupu mmiri apụta n'ime tankị azụ̀?
Kedu otu ị ga-esi edozi mmiri tankị azụ?
Gịnị kpatara tank azụ m ji na-ekupụ ngwa ngwa?
Gịnị kpatara tank azụ m ji atụfu nnukwu mmiri?
Enwere m ike ịtinye mmiri na tank azụ m?
Enwere m ike itinye ihe mkpuchi mmiri mgbe azụ dị na tank?
Ekwesịrị m ikpuchi tankị azụ m n'abalị?
Kedu okpomọkụ kwesịrị ịdị na tank azụ?
Kedu otu esi etinye mmiri na tank azụ mgbe ị sachara ya?
Kedu oke mmiri kwesịrị ịdị na tank azụ?
Ugboro ole ka m kwesịrị ịgbanwe mmiri na tank azụ?
Kedu ka m ga-esi mee ka tank azụ m dị mma?
Kedu mgbe mbụ ị ga-ebu ụzọ gbanwee mmiri?
Ị nwere ike ịgbanwe mmiri aquarium ọtụtụ oge?
Kedu ka m ga-esi mara ma ụgbọ mmiri m nwere obi ụtọ?
Kedu ka esi emeso mmiri n'ime tank?
Kedu ka esi emeso mmiri maka azụ?
Kedu ka mmiri mgbapụ dị njọ maka azụ?
Ugboro ole ka a ga-azụ azụ?
Ogologo oge ole ka ị ga-echere tupu ị gbakwunye azụ ọzọ?
Idobe tankị azụ dị jụụ Mee ka aquarium gị pụọ na windo anwụ na-acha ma tinye ya n'akụkụ dị mma nke ime ụlọ ahụ. Nweta mkpuchi tankị iji mee ka evaporation dị ntakịrị. Ọ bụrụ na ị na-edozi tank ọhụrụ, họrọ nke na-enweghị oke elu. Jiri ọkụ na-ekpo ọkụ dị obere dị ka LEDs na anaghị ahapụ ọkụ tank mgbe niile.
Evaporation mmegharị ikuku na-ebelata ka iru mmiri dị n'ikuku dị n'elu mmiri na-abawanye. Ọ bụ ya mere ịtinye mkpuchi iko na tank gị na-ebelata ọnụ ọgụgụ evaporation. Okpokoro uzuoku dị n'etiti elu mmiri na mkpuchi iko na-eme ka ọ sie ike maka ikupu ime.
Chlorine n'ogo nke 2ppm (akụkụ kwa nde) n'ihe dị ka galọn mmiri iri ga-ewe ihe ruru awa 10 iji kpochapụ kpamkpam. Ọ dị mkpa iburu n'obi na ọnọdụ ụfọdụ dị ka ọkụ ultraviolet, ikuku ikuku, na mgbasa ozi kwesịrị ekwesị ga-eme ka usoro ikpochapụ ahụ dịkwuo ngwa.
Azụ tank mmiri evaporating bụ nkịtị; Otú ọ dị, e nwere ụzọ iji belata ya. Okpomọkụ bụ isi ihe na-akpata evaporation mmiri, ya mere obere okpomọkụ, ka mma. Okpomọkụ dị ukwuu ọ bụghị nanị na-eme ka mmiri na-ekupụ ngwa ngwa, kamakwa ọ na-eme ka metabolism nke azụ gị na-agba ọsọ ọsọ, na-agbakwunye nsị na tank ma na-eme ka azụ dị ike.
Ọkwa mmiri nke aquarium gị ga-agbanwe. Ọtụtụ mgbe n'ịkwada ọkwa mmiri bụ naanị ikuku na-ekupụ, nke na-ebutekarị oke okpomọkụ na ihu igwe na-ekpo ọkụ. Ọ bụrụ na ị nwere akwarium a na-emeghe, tụlee iji tray evaporation n'oge okpomọkụ iji belata mfu mmiri.
Jupụta mmiri dị ọcha ihe dịka ụzọ abụọ n'ụzọ atọ ruo ụzọ anọ n'ụzọ anọ. Jiri nwayọ wụsa mmiri si na bọket na efere dị na akwarium. Tinyegharịa nzọụkwụ isii na asaa ruo mgbe tank ahụ jupụtara na mmiri ọkara. Tinye osisi na ihe ịchọ mma.
Ị nwere ike ịgbakwunye mmiri na-edozi mmiri na mmiri nwere azụ dị na ya ma ọ bụrụ na ị na-ewepụ obere akụkụ mmiri. Ọ bụrụ na ị gbanwee mmiri ahụ kpamkpam, ịkwesịrị ịgbakwunye ihe mkpuchi mmiri na mmiri tupu ị gbakwunye azụ ahụ iji zere azụ na-egbu egbu site na chlorine, chloramine, ma ọ bụ amonia.
Ọ bụrụ na ị nwere azụ̀ na-awụli elu, a na-atụ aro ka ikpuchi tank gị, ọ bụghị nanị n'abalị kamakwa n'ehihie. Ndị ọzọ na-abụghị nke ahụ, mkpuchi maka tankị azụ gị dị mkpa naanị n'abalị n'ime ime ụlọ aquarium ebe okpomọkụ nwere ike ịdị elu nke ọma iji wepụ mmiri ahụ nke ọma.
Ewezuga ụfọdụ ụdị mmiri oyi, ọtụtụ azụ aquarium chọrọ mmiri ọkụ. Bettas, discus na ụfọdụ ụdị ndị ọzọ na-eme nke ọma na mmiri dị n'etiti 76º na 85ºF, ọtụtụ azụ ndị ọzọ na-ekpo ọkụ na-ahọrọ oke nke 75º na 80ºF, na goldfish kacha mma site na 68º ruo 74ºF.
Mgbe ịmechara ihicha tank gị, ị nwere ike mejupụta tank ahụ na mmiri ọhụrụ. Gbaa mbọ hụ na mmiri ọhụrụ ị tinyere n'ime tank ewepụlarị chlorine site na iji ọgwụgwọ oyi. Nke a bụ naanị oge ị ga-agbakwunye mmiri na tank azụ.
Ị kwesịrị ị na-ejupụta tank ahụ ruo otu inch n'okpuru mkpụbelata n'ihi na kọlụm mmiri na usoro ikuku ga-emepụta afụ nke na-efesa elu. Mgbe eriri mmiri dị oke elu, mmiri nwere ike ịfesa na mpụga tank.
Ị ga-eme mgbanwe mmiri 25% kwa izu abụọ ruo anọ. Enweghị ihe mere a ga-eji wepụ azụ n'oge mgbanwe mmiri. Jide n'aka na ị na-akpali gravel ma ọ bụ jiri ihe mkpocha ajị anụ mee n'oge mgbanwe mmiri. Mgbe ị na-agbakwunye mmiri na aquarium, jiri Tetra AquaSafe® wepụ chlorine na chloramine.
Ndụmọdụ 10 dị mkpa maka idobe akwarium dị mma Dozie mmiri gị nke ọma. Mee ka azụ gị banye na mmiri. Na-ese n'elu azụ n'ime akpa ha. Jikwaa nguzozi pH na ọkwa kemịkalụ ndị ọzọ. Gbaa mbọ hụ na mmiri dị mma. Na-agbanwe mmiri mgbe niile. Iko tankị dị ọcha na ihe ndị ọzọ. Họrọ nha kwesịrị ekwesị maka tank gị.
Mee mgbanwe mmiri 25% mgbe ụbọchị iri na ise gachara. Cheta iji mmiri mmiri Aqueon na-agwọ mmiri mgbata tupu ịtinye ya na akwarium gị. Enwere nkà ihe ọmụma dị iche iche na ole na ugboro ole a ga-agbanwe mmiri, mana 15% ruo 10% kwa izu 25 ruo 1 bụ ezigbo iwu isi mkpịsị aka.
Iji mechie, ee, ị nwere ike ime ọtụtụ mgbanwe mmiri. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe karịrị 1 mgbanwe mmiri kwa ụbọchị, azụ gị ga-enwe nrụgide na-enweghị isi. Nke a bụ n'ihi na paramita mmiri na-agbanwe. Agbanwela karịa 50% nke mmiri n'otu oge, n'ihi na nke a nwere ike igbu nje bacteria bara uru na aquarium.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ndị a bụ ụfọdụ ụzọ ị ga-esi mara ma azụ gị nwere obi ụtọ. Ha na-egwugharị azụ na azụ n'efu na ike gburugburu tankị ahụ. Dị ka ụmụ mmadụ, azụ nwere obi ụtọ nwere ike na-egbuke egbuke na akpụkpọ ahụ ha. Ha adịghị atụ egwu azụ̀ ndị ọzọ dị na tankị ahụ. Ha na-eku ume nke ọma.
Ọ bụrụ na agbalitela sedimenti ahụ, enwere ike iji chlorine na/ma ọ bụ sie mmiri ahụ n'ụdị kemịkalụ tupu eri ya. Nhazi kachasị mma bụ ịnweta tankị abụọ ma kpochaa ha ọzọ. A nwekwara ike iji ụdị ọgwụgwọ mmiri ndị ọzọ, dị ka mkpochapụ na ọkụ ultraviolet (UV) ma ọ bụ nzacha.
Gbanwee 10% nke mmiri aquarium gị kwa izu ma ọ bụ 25% kwa izu abụọ. Mmiri ngbanwe kwesịrị ịdị otu okpomọkụ dị ka mmiri aquarium. Na-emeso mmiri mgbata mgbe niile na ihe mkpuchi mmiri iji wepụ chlorine na amonia tupu ịtinye ya na akwarium. Gbanwee katrij nzacha opekata mpe otu ọnwa.
Mmiri mgbata nkịtị dị mma maka imeju akwarium ma ọ bụrụhaala na ị hapụ ya ka ọ nọdụ ruo ọtụtụ ụbọchị tupu ị gbakwunye azụ (chlorine na mmiri mgbata ga-egbu azụ). Ọ dị mma ikwe ka nzacha ahụ na-agba ọsọ otu izu tupu ịtinye azụ na tank.
Ọtụtụ akụkụ, ịzụ azụ gị otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'ụbọchị zuru ezu. Ụfọdụ ndị na-enwe mmasị na-ebudị azụ̀ ha otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ n'izu iji mee ka ha kpochapụ usoro nri nri ha. Azụ buru ibu, nke na-anọkarị otu ebe nwere ike ịga ogologo oge n'etiti nri karịa obere azụ na-arụsi ọrụ ike.
Ị na-achọkarị ichere opekata mpe izu abụọ n'etiti iwebata mgbakwunye ọhụrụ na tankị azụ gị. Nke a na-enye oge maka nzacha bayoloji iji jide ya ọzọ. Oge a na-enye ohere ka azụ ọhụrụ ahụ mara nke ọma na tankị azụ, na nke ochie, nke nwere ike ime ka ị mara ihe mgbakwunye ọhụrụ na tank azụ gị.
Ajụjụ: Otu esi akwụsị ịgbanye mmiri mmiri na-ekpo ọkụ
Nwere ike Azụ tank mmiri Conditioner Ime Tank Water Murky
Ajụjụ: Ego ole ka tank mmiri na-agbanwe
Ego ole ka mmiri na-agbanwe tankị azụ
Otu esi emeso mmiri tankị azụ
Otu esi emefu mmiri tankị azụ
Ajụjụ: Otu esi enyocha mmiri tankị azụ
Azịza ngwa ngwa: Nwere ike Azụ nwere tank mmiri
Ajụjụ: Ị nwere ike iji tank mmiri dị nro mmiri
Ego ole ihe mkpuchi mmiri maka tankị azụ
Ajụjụ: Ego ole Amoxicillin Azụ tank Aquarium mmiri
Ego ole maka tankị azụ